Afrika: Fursad Maalgashi By, Saciid Cali Shire
December 24, 2012 1:41 pm GMT - Written by PP - Edited by PP
Meesha 10 sano ka hor joornaalka “The Economist” uu Afrika ku tilmaamay “qaaraddii aan mustaqbalka lahayn”, horraankii sannadkaan wuxuu ku tilmaamay “xiddig soo baxaysa”. Asbaabta ugu weyn ee keentay in Afrika lagu tilmaamo xiddig soo baxaysana, waa koboca dhaqaale ee ay samaysay 10-kii sano ee la soo dhaafay.
Qof kasta oo fiiriya tirakoobyada dhaqaalaha wuxuu arkayaa in Afrika, intii ka dambaysay 2000, ay ahayd qaaradda labaad ee ugu koboca fiican caalamka – Aasiya oo kaliya ayaaba ka horraysay. Kobocaas dhaqaale, Afrika inteeda badan, waxaa ka horreeyey ama dhinac socday isbeddello la taaban karo oo laga sameeyey dhinacyada: dawlad-wanaagga, la dagaallanka musuq-maasuqa iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha. Awoodda wax iibsiga shacabka (purchasing power) oo iyana si aad ah sare ugu kacday, ayaa gacan weyn ka geysatay kobocaas. Kobocaas dhaqaalaha iyo isbeddelladaasi waxay Afrika ka dhigeen qaarad si aad ah ay isha ugu hayaan sharikaadka iyo dawladaha caalamka oo dhammi. Sii Akhri Puntlandpost.com